ဘာဘာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘာဘာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး
Posted by မောင်ရိုး on Feb 10, 2013 in Creative Writing | 33 comments
အဖျက်ခံရနိုင်တဲ့ ပို့စ် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကြိုပြောထားပါရစေ …
အခုတလော မအားလပ်တာနဲ့ ရွာထဲမမြဲပါဘူး …။. ဒါပေမဲ့ မကြာမကြာ ဟိုချောင်းဒီချောင်းနဲ့ ဆိုတော့ ..
ဘော်ဘော်များရှယ်တဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုကိုဖတ်မိရာက အတွေးလေးတစ်ခု ရလာလို့ပါ ….
ရွာထဲအေးနေလို့ ဖွ တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး …. ကြိုပြောထားပါရစေ ….
ဒီပို့စ်ကို တာဝန်ရှိသူများက မသင့် တော်ဘူးလို့ထင်ရင် အချိန်မရွေးဖျက်နိင်ပါတယ် ….
ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး …..။
ကဲဗျာ ….. လိုရင်းကိုစလိုက်ကြရအောင် …….
ကျနော် ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်ဘာသာကိုမှ ပြစ်တင်ရှုံ့ ချလိုစိတ်မရှိပါဘူး ။
ယခင်ကတည်းကလည်း သူ့ သဘောသူဆောင် ဆိုပြီး ကိုယ့် ကိစ္စကိုယ်လုပ်ခဲ့ တာပါ …။
သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူလုပ်တာ အထူးပြောစရာမရှိပါ ….။ သို့သော်လည်း …. ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး
နိုင်ငံရေး မျက်နှာယူတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ကိစ္စလေးတွေတွေ့ လာလို့ နဲနဲ ပြောပါရစေ ..။
အားလုံးလည်းသိမှာပါ …။ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းတာတို့ …၊ ညီညွတ်ရေးတို့ ….စသည်ပေါ့ လေ …
ဒီလို သူယုံကြည်ချက်နဲ့သူ ရပ်တည်လာတဲ့ ဘာသာကြီးလေးခုဟာ ပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ အရာလည်း
မဟုတ်ပါဘူး ….။ သဘောသဘာဝလည်း မတူနိုင်ပါဘူး ….။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်က ဘယ်ဘာသာကိုမှ
ပုတ်ခတ်စော်ကားပြီးရေးးနေတာ မဟုတ်ဘူးနော် ….။ ဥပမာ လေးနဲနဲ ပြချင်လို့ပါ ….
မနက်က ဖေ့ ဘွတ်မှာ ရဟန်းတစ်ပါး က အစ္စလမ် ဘာသာဝင် တစ်ယောက် ရဲ့ နာရေးမှာ စုပေါင်း
ရွတ်ဖတ်နေတာကို ဓတ်ပုံအဖြစ်တွေ့ ရပါတယ် …. ဘာများလုပ်ပါလ်ိမ့် လို့ လဲထင်မိတယ် …
စဥ်းစားကြည့် တော့ …. သရဏဂုံပေးတာလည်းမဟုတ်နိုင် …. အမျှဝေတာလည်း မဖြစ်နိုင် ….
ဆုတောင်းတာရော …..ဘယ်လိုဆုတောင်းမှာလဲ …. ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ..ဒီလိုလား
ကျနော်တို့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တစ်ယာက် ယောက်က ဆုတောင်းပေးလို့ရတာမှာမဟုတ်တာ ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ …. ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရတာ တမျိုးပါပဲ ….
သူ့လူမျိုး သူ့ဘာသာ သူ့ဓလေ့ နဲ့ လုပ်ပါစေလေ …. ခုတော့ ..နိုင်ငံရေးမျက်နှာလှဖို့ထင်ပါရဲ့  …
ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးတွေလုပ်တော့ …. …..ကဲ …. တကယ်ရောညီညွတ်ကြရဲ့ လား…..
စဉ်းစားစရာပါ ….။ဥပမာ…. သူတို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ပလီ ၀တ်ကျောင်းကို ကျနော်တို့က
လုပ်အားပေးအနေနဲ့ ဆေးသွားသုပ်ပါပြီတဲ့ …. ကြိုက်ပါ့ မလား …ဒီလိုပဲ … ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး
ရဲ့  ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ သန့် ရှင်းရေးအတွက်သူတို့ကို လုပ်ခိုင်းပါပြီတဲ့  ….. သူတို့ကရော …
စေတနာရှိပါ့ မလား…… ဘယ်လိုမှ မတူတဲ့ အရာကို ဘာအကျိုး အတွက် ရည်မျှော်ပြီး
မျဉ်းဖြောင့်နှစ်ကြောင်းရဲ့ ဆုံမှတ်ကိုရှာနေကြတာလဲ..လို့ တွေးပြီး အဖြေမထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး …။
ရှိပါစေလေ.. ….. လုပ်တဲ့သူက လုပ်နေသလို …. လမ်းကြောင်းပေးတဲ့သူကလည်း ရေလာမြောင်းပေး
လုပ်ထားပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ဆိုတော့ ……..
အင်း …. ဘယ်သူကများထွင်လိုက်တာလည်း မသိ ။ ရှေးတုန်း ကလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမရှိခဲ့ ။
မသကာ မင်းတို့ရန်မဖြစ်နဲု့ လို့ ပြောလိုက်ရောပေါ့  …. ခုတော့ ..ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး
စည်းရုံးရေးများဆင်းလေသလား လို့ ….။ အဲသလိုသာ စည်းရုံးရေးဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့  …
နည်းနည်းလောက် တော့ပြောလိုက်ချင်သားးးးး …..
ဘာဘာ…. ဘာမှ မဆိုင်ဘူး……
ဘာဘာ…..ဘာမှ မဆိုင်ဘူး ……..
ဖွဘုတ်က သတင်းမှန်သော်ရှိ မမှန်သော်ရှိ …ကျနော်ကတော့ ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးဆိုတာကြီးကို
ခံစားပေးလို့ မရပါဘူး ..။
ဖြစ်သင့် တာက ဘာသာပေါင်းစုံ ရန်မဖြစ်ရေး ပဲ ဖြစ်သင့် တယ်လို့ထင်ပါတယ် …
ကိုယ်ကလည်း..ထိန်းချုပ်မရ.. သူများကလည်းထိမ်းချုပ်မရ.. ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့လောကသစ္စာတရားကို…
တချို့က… မိုးနတ်မင်းအလို… တဲ့..
အဲဒီလို.. ဘာမှန်းမသိတာကို.. ဘာမှန်းမသိတာနဲ့လွဲချတာက.. အားလုံးတူတူပါပဲ..
ဘာမှန်းမသိတာကို.. ဘာမှန်းမသိတာနဲ့… လွှဲချ.. ဘာဘာတကယ်တော့..ဘာမှမသိ..
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူကြီးငါးချက်
ဘဘသဂျီးကတော့ မဆိုင်တာ ဆွဲထည့် ပြန်ပြီ
အဲဒီမိုးနတ်မင်းတို့ဘုရားသခင်တို့ က ကျနော်မပြောဘူးနော်
ကျနော်ဆိုလိုတာက ကိုယ့် ကိုအားပေးဖို့ အတွက် ဘာသာရေးကို အသုံးချတဲ့ အကြောင်းလေး …
ဘာသာရေးဆိုတာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့  ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပြီး
နိုင်ငံရေးဆိုတာက နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် စီမံခန့် ခွဲရေး ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ 
၄င်း တို့ အလိုရှိသော အခွင့် အာဏာ ဆိုတော့ ….
ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလားလို့….
ကြာပါပြီ …. ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို အသုပ်စုံလုပ်နေတာ
အဲဒါလေးကိုခွဲပြီးမြင်စေချင်လို့ပြီးတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များလည်း
ကိုယ့် အရေးကိုယ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးစစ်တုရင်ပွဲမှာ ထိုးကြွေးမခံစေချင်လို့ဒီသဘောပါ ။
ဘာဘာ တွေ သ်ိအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာ ဘာဘာသဂျီးမင်းလည်း
ဘာဘာ တွေကို ဘယ်လိုပြောမလဲ …?
ဘာဘာသဂျီးမင်းက ဘာမှမသိတာတွေကိုအတူတူရောရင်ဖြင့် 
ဘာဘာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ 
မှန်ပါတယ် ။သု့ိသော် ….. ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြုဖွယ်မျာ အတူတူဆောင်ရွက်လို့ မဖြစ်နိုင်တာပါ ။
သဘောသဘာဝ မတူလို့ လေ …..
မယုံရင်မေးကြည့် ပါလား အတူတူလုပ်မလား လို့ 
ဖြေမယ့်အဖြေကို သိပြီးလို့ ပြောတော့ပါဘူးဗျာ
လွပ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ဆိုကတည်းက ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မပုတ်ခတ်ဖို့ ၊ လွပ်လပ်စွာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ စတာတွေ ပါပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်
အတူတူကတော့ ဘယ်လိုလုပ် ရမှာလဲဗျာ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ
ဦးဆာမိကြီး က ….
ဘာဘာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး .. ပြောတော့ …
ကျုပ်ကလည်း ဟောဒီလို ပြန်ပြောလိုက်မယ် …
ဘာဂျာ ဘာမှ မသိချင်ဝူးးးး
နည်းနည်း ပွားကျိချင်ဘာဒေးဒယ် …
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော် ကပေါ့ဗျာ …
ဘုရားရှင်က လယ်သမားကြီး တစ်ယောက် အကျွတ်တရားရဖို့ပဲ ဆိုပါစို့ ….
အဲ့ဒါကို ကြိုပြီး မြင်လို့မို့ တကူးတက လယ်သမားကြီးဆီကို သွားရောက်ပြီး …
စပါး စစိုက်တဲ့ အချိန်စလို့ (ထင်တယ်)
လူစကားနဲ့ ပြောမယ်ဆို သွားရောတယ်၊ ခင်မင်အောင် လုပ်တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ …
နောက်ဆုံး စပါးတွေ သိမ်းကာနီးမှ မိုးကြီးရွာလို့ စပါးတွေ အကုန်ဆုံး …
ဒီအခါ ဘုရားက ကြွလာပြီး တရားဟောလို့ လယ်သမားကြီး အကျွတ်တရား ရသွားတယ် …
ဒီအပေါ်က အဖြစ်ကို ကြည့်ရင် …
ဘုရားရှင်က ကြိုမြင်လို့မို့ သွားရောခဲ့တာ ……
အခု အဖြစ်ကတော့ ဘာမြင်လို့လဲ မသိတတ်ဘူးရယ် …………။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံ စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ 
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲဖို့ အတွက်
မြန်မာ/ဗမာ/ဘိရုမာ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသလို
အခုချိန်မှာ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်
ကိုဆာမိ ရေ သည်လို ပို့ စ်မျိုး များများရေးပေးပါဗျို့ 
@ ကိုပေ ၊ မခိုင်ဇာ ၊ ကိုရင်အံဇာ ၊ ဗုံဗုံ ၊ ကိုပီချိုကြီး …..
ခုလို ခဲမှန်ခံရနိုင် တဲ့ ပို့ စ်ကို လာရောက်အားပေးတာ အထူးကျေးဇူးပါ နော ….။
ဒါကြောင့် ပြန်လှည့် ပြေးနိုင်အောင် အစမှာကတည်းက အဖျက်ခံရနိုင်တဲ့ ပို့စ် လို့ ပြောခဲ့တာ
ထို့အတူပါပဲ လာရောက်ဖတ်မိသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း …..
ဆွိဆွိ ဘာမှ မကြည့်ဘူး ဦးဆာမိ။
အဟုတ်ကြီး။ ဒီ သီတင်း ကို ဒီပို့(စ) မြင်မှ ပြန်ရှာရတာ။
ဦးဦးဆာမိ စားပြီးပြီလား နေကောင်းတယ်နော် ကျန်တာပြောတတ်ဘူး လေးလေးနက်နက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ရှင့်
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က မြတ်စွာဘုရားဟာ တစ်ခါတစ်ရဲ ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အခါမှာ စောပြီး ကျောင်းတိုက်မှ ထွက်ကာ ကျောင်းနဲ့ မြို့ကြားမှာ ရှိတဲ့ တိတ္ထိတွေရဲ့ ကျောင်းကိုဝင်ရောက် နှုတ်ဆက် စကားပြော တတ်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီအခါမှာ တိတ္ထိတွေက အယူမတူသော်လည်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လေးလေးစားစား နှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။
အယူဝါဒများဆွေးနွေးရင်း ဗုဒ္ဓအယူကို နှစ်ခြိုက်လို့ အယူပြောင်းတဲ့သူရှိသလို သူတို့ အယူကို မစွန့်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့။
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်က နတ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အပြုအမူမျိုးဖြစ်မှာတွေကို မယုံကြည်သော်လည်း မကျူးလွန်ဖို့ ပညတ်တော်မူပါတယ်။
အဲဒါဟာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဖြစ်စေဖို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ လမ်းညွှန်မှုပါ။
ခေါင်းထဲရှိတာ ရေးတာဖြစ်လို့ ကျမ်းကိုးလိုချင် ရှာပေးပါမယ်။
ဒါပေမယ့် တော်တော်များများလည်း ဒါတွေဖတ်ဖူးကြမှာပါ။
9/11 ဖြစ်ပြီးကာစက အင်းလျားလိပ်ဟိုတယ်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဖက်က ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီး တက်ရောက်ပါတယ်။
ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းတာပါပဲ။
ဘာသာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြစ်တင်ခြင်းမပြုကြပါဘူး။
အဲဒီလို အခမ်းအနားမျိုးတော့ အတူတူ လုပ်လို့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျမ်းကိုးတွေက ရှာရမှာ ပျင်းလို့ ကိုယ်တွေ့လေး ပြောချင်ပါတယ်။
ကျမမှာ သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းထိ တွဲခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင် သူငယ်ချင်းမလေး ရှိပါတယ်။သိပ်ချစ်ပါတယ်။
သူတို့ အစ်ရင် ကျမကို ဆမိုင် ပို့ပေးတယ်။
သူ ကျောင်းတက်ရင်း ဥပုသ်စောင့်ရင် ကျမက သူတံတွေးထွေးဖို့ စက္ကူခွက်ကလေးတွေ ခေါက်ပေးပြီး ထွေးထည့်စေပါတယ်။
သူက ကျမထက် ဆင်းရဲတော့ ကျောင်းစားရိတ်နဲ့ သူမကျန်းမာတဲ့အခါ ဆေးဖိုးတွေကို ကျမ မုန့်ဖိုးထဲက စုပြီး ထောက်ပံ့ပါတယ်။
သူစာမရရင် ကျမက စာပြပေးပါတယ်။အဲဒီ သူငယ်ချင်းကို ဘာသာရေးအရ တစ်ခါမှ ဆွယ်တရား မဟောခဲ့ပါဘူး။
သူဘွဲ့ရပြီး ကျောင်းဆရာမလုပ်တော့ သူ့အိမ်က ဘာသာတူနဲ့ ပေးစားမယ်အလုပ်မှာ အဲဒီ ဘာသာမယူချင်တော့လို့ အိမ်ကို အသိမပေး ဇာတ်မြှုပ်ပြီး ဝေးရာကို ထွက်သွားပါတယ်။
ကျမသူငယ်ချင်း (2000 gp) မေအေးဦးဟာ မူလက ခရစ်ယာန်ပါ၊သူ ချပ်ခ်ျ တက်ရင် ကျမလည်း လိုက်တက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမ သူ့ဘာသာထဲ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။
သူလည်း သူ့ဖာသာ လေ့လာရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုးကွယ်မှုပြောင်းလိုက်တာ ခုဆို ကျမထက်ပိုပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားဖို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်နေပါပြီ။(ကျမ အတုယူလေးစားရတဲ့ သူငယ်ချင်းပါ)
ကျမအမြင်မှာ ဘာသာမတူသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေလို့ရတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကို လေးစားစေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်က ကောင်းအောင်နေပြရမယ်။
လက်တွေဖြန့်ပေးထားရင် ဖြူသောလက်နဲ့ မည်းသောလက်တွေ ဆုပ်ကိုင်လို့ ရသွားကြမှာပါ။
ခုလို မအားလပ်တဲ့ကြားက ရှည်ရှည် ဝေးဝေး ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါဘဲဗျာ …။
အစ်မ သဘောကိုကောင်းကောင်းမှန်းမိပါတယ် ။ ကျနော်လည်း အစထုတ်ဖွ သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့
ဟိုလှည့် ရေး ဒီလှည့် ရေး လုပ်၇င်း လည်သွားတာဗျို့  …။. ကိုကြီးပေါက် ကော်မန့်  နဲ့မှဘဲ
လို၇င်းရောက်တော့ တယ် ….။
ကျနော်လည်း အလုပ်သဘောအရ ရော လူမှုရေးအရပါ ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံပေါင်းသင်း
နေရတာပါ ။။ ဆိုးသူရှိသလို ကောင်းသူတွေလည်း အများကြီးပါ ။ ဘာသာမို့ လူမျိုးမို့ ဆိုးတယ်
ကောင်းတယ်မရှိပါဘူး …။ ခက်တာက နိုင်ငံရေးအရအားသာလိုမှုအတွက် စည်းရုံးတာတို့ ထိုးကျွေး
လိုက်တာတို့ ၊ မိတ်ကပ်လိမ်း လိုက်တာတို့ ကို စိတ်မချမ်းသာလို့ပါ …။
အစ်မရဲ့  သူငယ်ချင်းတွေရဲ့  အဖြစ်လေးတွေက တကယ် ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာပါပဲ ။
၀တ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်တောင်ရေးလို့ ရပါတယ် …။
တကယ်တော့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကြပြီး သင့် သင့် မျှမျှနေ …. ဒီလိုဆိုကောင်းတာပေါ့ နော …
ခက်တာက ညီညွတ်ကြပါ လို့ပြောတာလည်း %%%% တို့ ပါပဲ …
ရန်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတတ်တာလည်း %%%%% တို့ ပါပဲ …..
ဒါကြောင့် … ##### ရေးနဲ့ &&&&&& ရေး က
ဘာဘာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ …
ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူး။
မြတ်စွာဘုရားက မိမိနဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ မတူသော နေရာအရပ်ကို မကြွရဟု သတ်မှတ်ခဲ့လို့လားဗျ။
ဘုန်ေးတ်ာကြီးများ ပင့်လျောက်သူရှိရင် ကြွလို့ရတယ်မဟုတ်လား။
အစ်ကိုဦးခ ခင်ဗျ ….
ပင့်သူရှိရင် ကြွနိုင်ရင်ကြွရမယ် ထင်ပါတယ် ။ ၀ိနည်း တော့သေချာမသိပေမဲ့ ဆွမ်းမခံ အပ်သော
နေရာအချို့  ရှိကြောင်းတော့ကြားဖူးပါတယ် ။
ဒီပို့စ်က ဘာသာရေးဝေဖန်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးအားသာချက်အတွက် ကြားက
အသုံးချ တဲ့သဘောတွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ . …။
ပင့် သူက ငြင်းဖို့မသင့် သောသူ ဖြစ်ပြီး တစ်ဘက်ဘာသာခြားများဘက်ကလည်း ကြားထဲက ပင့် ပေးသူက
ငြင်းဖို့ မသင့် သူဆိုရင် သူတို့လည်း လက်ခံချင်ချင် လက်မခံချင်ချင် လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ် ။
ဓတ်ပုံထဲက အဖြစ်မျိုးလိုပေါ့  …။
ကျနော်ဆိုလိုချင်တာကို ပေါ်လွင်အောင်မရေးနိုင်ခဲ့တာခွင့် လွှတ်ပါ ။
သို့သော် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်၏
မည်သည့် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်မဆို ကင်းလွတ်စေချင်ပါ၏။
အစ်ကို ကိုပေါက်ရေ …..
ကျနော်ကြိုးစားပမ်းစား နဲ့ စာလုံးရေ (၂၀၀) ကျော်ရေးတာ လိုရင်းမရောက်လိုက်ဘူးဗျို့  ဟဲ ဟဲ ။။
အစ်ကို ရေးတဲ့ စာလေးကြောင်းမှပဲ လိုရင်းရောက်တော့တာ
ကျေးဇူးဘဲဗျို့  ….
အဲဒါဘဲ … ပရိုနဲ့ အပျော်တမ်း ပေါက်ကရ ကွာခြားချက်က …
ကျနော့်  အဖြစ်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ” ခိုးချင်လိုက်တာလည်း ပျာလို့ ၊ လက်နှေးလိုက်တာလည်းချာလို့ ”
ကဲ ကဲ အားလုံးသောစာဖတ်မိသူများ … ကျနော်မောင်ဆာမိမှ ဘာဘာ ဘာမှန်းမသိအောင်ရေးမိတာ
ခွေးလွှတ်ရုံမက ကျားပါလွှတ်လိုက်ပါဗျို့  ….. :harr:
ဂလိုရှိသဗျ။ ဘာသာတရားဆိုတာ အဆိုအဆုံးမ သက်ရှိမဟုတ် သက်မဲ့ဖြစ်လို့ သူ့ကို အသုံးချ ဋီကာချဲ့သူ လူသားများမှာသာ အပြစ်ရှိတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဘာသာတရား အဆုံးအမကို ဘယ်လို အင်တာပရက် ဘာသာပြန်လည်းအပေါ် မူတည်တယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း လက်ခံလို့ မလက်ခံလို့ ကံယုံလို မယုံလို့ ပြသနာမရှိဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ လက်ခံသူ မခံသူ ယုံသူ မယုံသူ များအပေါ် ဘာသာရေး ယုံကြည်သက်ဝင်သူများ တနည်းအားဖြင့် စင်ကြယ်မြင့်မြတ်သူများ နောက်လိုက်တပည့်တပန်းများရဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ် ပြုမူဆက်ဆံပုံကသာ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်။ ကံကိုယုံတယ်ဗျာ၊ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံတယ်ဗျာ၊ ဖြစ်သမျှ ကံပေါ်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအပေါ် ပုံချနိုင်ရင် ကောင်းသူ ဆိုးသူ တရားတယ် မတရားဘူး မရှိတော့ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ ဖန်ဆင်းရှင်အယူ ပြောင်းသွားတယ်ဗျာ.. ဩော်သူကံပဲ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကနေ ဗုဒ္ဓအယူ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ… ဒါ ဖန်ဆင်းရှင် အလိုတော်ပေပဲ၊ အဲသလို မြင်ရမယ်လေ။ သို့ပေမဲ့ ဒဂယ်ဖြစ်လာတော့ ကိုယ်လိုရာဆွဲ အဓိပါယ်ဖွင့် ဋီကာချဲ့ရင်း သူ့လူ ငါ့လူ အတ္တအစွဲတွေ များလာပြီး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ရ ချမှတ်ထားတဲ့ ဟာမိုနီ လိုက်ရောညီထွေမှုတွေ ပျက်ရတာ။ အကောင်းဆုံးက ဘာသာတရား စည်းဘောင်ခတ်မှုတွေ ဖျက်ပစ်လိုက်၊ လူဆိုတာ တခုခု အမှီပြု ဆုပ်ကိုင်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတော့ မရှိရ မကိုးကွယ်ရ တားမရနိုင်ဘူး။ ဟိန္ဒူဝါဒ ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့်လည်း ဒီသဘောပဲ။ အတိတ်ကံ မူတည်ပြီး ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် လူတန်းစား ခွဲတယ်၊ အမှန်အမှား ခဏထားလိုက်၊ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဘဝတွေကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် အတန်းအစား သတ်မှတ်ပြီး နေထိုင်ပြုမူခိုင်းတယ်၊ သို့သော် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာတဲ့အခါ မူလရည်ရွယ်ချက်ကနေ သွေဖီဖောက်ပြန်ပီး ဖိနှိပ်မှု အနိုင်ကျင့်မှု မတရားမှုတွေ များလာတဲ့အခါ လောကနိယာမအတိုင်း တော်လှန်အုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အခြား ဘာသာများလည်း ဒီသဘောပဲ။ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ မူလအဆုံးအမနဲ့ လျော်ကန်ရဲ့လားဆိုတာ။ ဒီတော့ ခေတ်တခေတ်မှာ ဘာသာအမည်နာမ တည်ခဲ့ရှိခဲ့တာ ငြင်းမရသလို ဝေဖန်အပုပ်ချဖို့လည်း မလိုဘူး၊ မျက်မှောက်ခေတ် အချိန်နဲ့သာ လျော်ညီမှန်ကန်မှု ရှိမရှိ ကြည့်သင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်သလား… ရာခိုင်နှုန်း အတော်နည်းပါတယ်။ လစ်ဘရယ်ဝါဒ သိပ္ပံနည်းပညာ ဘယ်လောက် ထွန်းကားလာလာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေးဝါဒ အခြားကမ္ဘာခြမ်းမှာ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ရှိနေတာ သက်သေပဲလေ။ သဟာကြောင့် ဘာသာတရား အမည်နာမကို ဇောင်းပြုအသားပေးမည့်အစား အဆုံးအမ အစစ်အမှန်ကိုသာ ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးဖို့ နှိုးဆော်သင့်ပါဂျောင်း…
အဆုံးအမဆိုတော့ သာသနာပေါ့  …
ဟုတ်ပါတယ် …. အဓိက ကတော့ အရင်ဆုံး ကိုယ့် သဏ္ဍန်မှာ သာသနာတည်အောင် လုပ်သင့် တာပါ ။
သာသနာဆိုတော့ … အခြား ဘာသာများလည်း သူတို့ရဲ့  သက်ဆိုင်ရာ သာသနာပေါ့  ။
သို့ပေမဲ့ ဘာသာအမည်တော့ ဖျောက်နိုင်မည် မထင်ကြောင်း …..
မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ခဲ့လို့ ဆိုတာထက်.. ကိုယ်တိုင်နှလုံးသားထဲက ယုံကြည်တာမို့ .. ဘယ်သူက ဘယ်လို လာဆွယ်ဆွယ် .. ဆွယ်တဲ့သူသာ .. မောမယ်.. တို့များတော့ .. အေးဆေးပဲ..
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်ရော.. ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ဒီယုံကြည်မှုဟာ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး. .
လည်ပင်းကို ဓားနဲ့ထောက်ပြီးမေး ရင်တောင် .. .တို့များကတော့ .. .. ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ..
ကဲကဲ ကြုံတုန်းလေး.. သရဏဂုဏ် တင်သွားဦးမှ..
အနာဂတဘယသုတ်မှာ အနာဂတ်သာသနာမှာ ကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာယခုပစ္စုပ္ပန်မှာ ကြုံတွေ့နေရတာတွေ နဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။
တကယ်ကိုတွေ့ နေရတာပါဗျာ ။မှန်လွန်းလို့ပြောတောင်မပြောရဲဘူး
တော်ကြာ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့  ။
ကော်မန့် ပြန်တာ နောက်ကျတာခွင့် လွှတ်နော
ခုတစ်လော အဝင်ကျဲပြီး မအားကြလို့ ပါ ။
” ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းတာတို့ …၊ ညီညွတ်ရေးတို့ ”
အနဲဆုံး ခေါင်းဆောင်တွေက ၊ အဲဒီလောက်လေးတော့ လုပ်ပြမှ ၊
ငယ်သားတွေ ရန်မဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ၊ နို့မို့ရင် တစ်ခြိမ်းခြိမ်း ဖြစ်ကုန်ပါ့မယ် ။
အောင်မြင်တာ ၊ မ အောင်မြင်တာ ကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့နော် ။
ပြဿနာစချင်နေတဲ့ အရိပ်အရောင်လေးတွေကြားနေရတယ်အဘရေ့
အဘက သတင်းစုံတော့စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် နဲ့ လုပ်ပါဦး
ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေတယ်မသိ …… နားကိုမနားဘူးအဘရေ
ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းမယ့် ပို့ စ်လေးတင်ပါဦး
ကို ဆာမိ ကလည်း ၊ အချွန်နှင့် လာမနေပြန်ပြီ ။
အဘ ကြားသလောက် ၊
၁ ။ ဟိုဖက် ဒီဖက် ( ရခိုင် ၊ ဘင်္ဂါလီ ) အရမ်းမုန်းနေကြပြီတဲ့ ၊ ပြန် စေ့ပေးဖို့ မလွယ်လှဖူးတဲ့ ။
၂ ။ ဘင်္ဂလားဒေရှ် အစိုးရလည်း ၊ ဒီရက်ပိုင်း လက်နက်တွေ ဝယ်နေတာတွေ့တာပဲ ။
အင်း ၊ တိုင်းပြည်ကြီး ဆင်းရဲဦးမှာပေါ့ကွယ် ။
သဗ္ဗေ သတ္တာ ၊ ကမ္မ သကာ ပါပဲကွယ် ။
မ မပါဘူးအဘရယ် ။ အခုပုံစံက ဇတ်ထားသလို တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက် ဖြစ်နေလို့ 
စိတ်ထဲ မသင်္ကာ ဖြစ်နေရတာ ။ ကချင်ဘက်မှာ အနည်းငယ်ငြိမ်ပြန်တော့ ဒီဘက်မှာ
ဟိုသတင်း ဒီသတင်းတွေ ကြားရပြန်ရော ။ ဘာသာရေးနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရင် အလွယ်
တကူ ပွ လာတာမို့နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသတိထားစေချင်တာပါ
ပြောရရင်ကျနော်တို့ဘုန်းဘုန်းများကလည်း ပူလွယ်အေးလွယ်ဆိုတော့ကိုယ်မပိုင်တဲ့
တောကို ခရီးမဆန့် စေချင်တာ ။ ကြားထဲက တစ်ယောက်ယောက်က ဖိအားပေးပြီး
ပြဇတ်တွေ ကပြခိုင်းနေတယ်ထင်လို ။
ဖြူးနားမှာဖြစ်သွားတဲ့  လူသတ်မှုလည်းလျော့ မတွက်နဲ့ အဘရေ ……
2000 ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ တောင်ငူ ပြဿနာဖြစ်တာ ကောလဟာလလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ နော
ဒါကြောင့်အဘကို ဆင်ခြင်နိုင်မယ့် အချက်လေးတွေ ထောက်ပြဖို့ အကူအညီတောင်းတာ ။
ကြည့်စမ်း ကိုရင့်ပို့စ်ကို အခုမှ ဖတ်မိတယ်
သူ့ဘော်ဘော် ၇၈၆အတွက် ဆုတောင်းပေးတယ်ထင်ပါရဲ့…
ပြောရရင် ဒလိုင်လားမားကြီးတောင် နမားဖတ်သေးတာဆိုတော့…
ဖိအားတွေပေးပြီး ပြဇတ်ကနေတာတွေကို စိတ်ကုန်လို့ ဗျို့ 
တကယ်တမ်း အရေးအကြောင်းဆို ကိုယ့် လူကိုယ် အရင်ထိန်းကြရမှာမဟုတ်လား
အများအားဖြင့်ထိမ်းသိမ်းတာ နောက်ကျနေသလိုဘဲ ။ လက်လွန်မှ
လိုက်ဆွဲနေကြတော့ဒဏ်ရာတွေများကုန်တာပေါ့။
ဖြစ်သင့် တာက အပြင်မှာ ဟန်လုပ်ပြီး နေတာထက်စာရင် ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်
ခေါင်းအေးအေးနဲ့  ဆင်ခြင်ပြီး ရန်မဖြစ်စေချင်တာပါ ။
ဒီမှာက ၃၆၀ံ ချွန်နေတဲ့ သူတွေကြားမှာ သတိလေးထားစေချင်လို့ ဗျို့ 
ဖြူချင်ဖြူမယ် မဲချင်မဲပေါ့ တို့ငြိမ်းချမ်းစွာကွဲလွဲမယ်….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူမျိုး၊အသားရောင်၊ဘာသာ မတူညီမှုတွေအပေါ်မှာ အမုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေကအကြီးမားဆုံးပါပဲ….
ဗုဒ္ဒ၊ အလာဟ်၊ ယေရှု.. ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ပါဘူး…
လူတွေရဲ့ အမုန်းကြောင်းဖြစ်ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေ.. လူတွေပဲ အဆုံးသတ်ရမှာပါ….
ကဲ…. စစ်ပွဲတွေပြီးတော့ ခရစ်ယာမ်၊ မွတ်စလင် စစ်သားလေးနှစ်ယောက် ကျင်းတကျင်းထဲမှာ မျက်နှာခြင်းဆိုင် လှဲလျောင်းပြီး သေလို့….
ငါ.. မပိုင်တဲ့ ငါ့…
ဘုရားသခင် အလိုမတူရင် သစ်ရွက်တစ်ရွက်တောင် သူ့လိုလို မကြွေ…..
မှန်ပါတယ်ဒေါ် Wow ….
ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ဘာသာရေးကို ခုတုန်းလုပ်ပြီး ရန်တိုက်ပေးကြတယ်
ပြီးတော့ တစ်ချို့ ကလည်း မျက်နှာယူကြတယ် ။
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကျားကွက်မှာပေါ့။
ကြိုက်သလိုလွတ်လပ်စွာကွဲလွဲပါစေ ဒါပေမဲ့  အသုံးချမခံရဖို့ တော့ သတိထာရမယ်ထင်မိပါကြောင်း …..
အတုအစစ်၊အစစ်အတု ရောသမမွှေရင် သတိမရှိလို့ကတော့ နောက်တစ်ပွဲပဲ။
အရေးကြီးသတင်း အမြန် share ပေးကြပါဦး
ယခု ယောကျာ်းလေး ၃ ယောက်နဲ့ မိန်းကလေး ၂ ယောက်ခန့်သည် ၉၆၉ လက်ပတ်များပတ်ပြီး ကြိုတင်စည်းဝါးရိုက်ထားသော ကုလားဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော မြန်မာများနှင့်ကုလားများအား ကုလားဆိုင်တွင် ဈေးမ၀ယ်ရန်ေ…ပြာဆိုနေကြပါသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုနေစဉ်အတွင်း ကုလားဆိုင်များမှ CCTV များဖြင့် ရိုက်ယူထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ၉၆၉ ဆောင်၇ွက်နေသူများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ဆောင်နေကြ သူများ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ။ ထိုသို့ ၉၆၉ လက်ပတ်များပတ်ပြီး ပတ်ပြီး ရမ်းကားနေသူများတွေ့ရှိပါ ကလည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် ဂန္တ၀ါစကအဖွဲ့ ၀၉၄၂၁၁၄၆၅၃၄ သို့ ဆက်သွယ်သတင်းပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။